गफ ! .....: म आफैंलाई केलाउंदैथिएं
Posted by दीपक जडित at 3:13 PM
रमाइलो लाग्यो यो 'टांसो' पढ्न। यसरी सललल-- बगेको रसिलो टाँसो पढ्नुमा बेग्लै आनन्द छ!
वास्तवमा तपाईँको दाइले एकदम सरल भाषामा देवकोटा, लेखनाथ र समका रचनाहरुको भिन्नता राम्ररी वर्णन गर्नुभएको छ।
जहाँसम्म धेरै लेख्ने-थोरै लेखे भन्ने कुरा छ, मेरो विचारमा थोरै लेख्दैमा गुणात्मक हुने भन्ने हैन। आफूलाई फुरेजति लेखिरहने र चित्त बुझेकालाई तु. कतै टाँस्ने, चित्त नबुझेकालाई कतै थन्काएर फुर्सद हुँदा काँटछाँट
गर्नुनै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई।
संख्या र गुणबत्ताको कुरामा बसन्त जि को कुरा नै सहि हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि ।
मुख्य कुरा हामी ब्लगमा लेख्‍छौं, पत्रीकामा होईन (मतलब हामी हाम्रो लेखाई बेचिरहेका छैनौं यतिबेला) त्यसैले आफुलाई फुरेको बेलामा लेखेकै राम्रो हो ।
त्यसो त ब्गल नै भए पनि नविनता र बिबिधता भएमा पक्कै रमाईलो र रोचक हुन्छ त्यसैले यस्तै खाले संझनाका कुराहरु र अनौपचारिक विचारको आलेखहरुमा पनि कलम चलाउदां पक्कै राम्रो हुन्छ होला तर गितै गीत वा गजलै गजल हुन्छ भनेर लेख्‍न नछाड्नु होला । कत्ती कुरा यहाँ टाँसे पछि परिस्कृत हुन्छ (साथीहरुले कमेण् ट नै नलेखे पनि कहिले काही “अफ-लाईनमा” सल्लाह दिन्छन भने कति चोटी लेखेर राखे पछि आफैले पनि फुर्सदमा “परिमार्जन” गर्न सजिलो हुन्छ )
आजकल पत्र-पत्रीकाको राजनैतीक समाचार बाट वाक्क भएकोले फुर्सदमा साथीहरकै ब्लग पढ्दा रमाईलो लाग्छ । तपाईको बाल्यकालको अलिकता झलक यो भन्दा पहिलेको “टाँसो” मा पढेको हो त्यसपछि यो पनि रोचक छ, जिवनमा यस्ता रोचक प्रसंग निक्कै होलान लेख्दै गर्नुहोला ।
आँफैलाई केलाउँदा केलाउँदै दाइलाई पनि ल्याउनुभयो । साथै अर्को कुरा ब्लग भनेको आफ्नो कुरो बिसाउने चौतारी हो, त्यसैले जे मन लाग्छ अनि जस्तो फुर्छ, लाइहाल्ने हो टाँसो ब्लग मा ।
वसन्तजी , दिलीपजी र आकारजी तपाईंहरुलाई धन्यवाद । वास्तवमै म भित्र अन्यौल थियो ब्लगनै भएपनि यसको अकर्षण त घटाईरहेको छैन एकोहोरो एकै प्रकारका पोष्टहरु राखेर भन्ने । प्रतिक्रियामा यो अन्यौल चिरिदिनुभएर मलाई शान्त बनाईदिनुभएको छ ।